ko htike's prosaic collection: ကန့်ကွက်ခြင်း
ကျွန်တော် ... မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေဖြင့် နအဖမှ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သော ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် နအဖ၏ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော၊ တရားမ၀င်သည့်နည်းဖြင့် ရေးဆွဲထားသော အမျိုးသားညီလာခံမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက်အရ ပြုလုပ်မည့် အဆိုပါ ဆန္ဒခံယူပွဲကို လုံးဝ မထောက်ခံနိုင်ကြောင်း ကြိုတင် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်လိုက်ပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 15:41
ပြည်သူတွေထဲမှာ နအဖ ကိုယုံကြည်သူကို ရှာအတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မယုံတဲ့ ဦးနှောက်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို လုံးဝမထောက်ခံပါဘူး။
Why should Burma have another election, while the NLD party has already won the landslide victory in 1990, fair and square election?
Junta could just stuff their own stupid election into thier bodies from the back side , findaplace to run away before they all get beheaded like that Kyantput in Htan Dapin.
9 February 2008 at 20:36